Mampikony Nifandona ny zandary sy ny vahoaka
Fampihavanam-pirenena Mbola lavitry ny afo ny kitay
Enim-bolana eo ho eo izay ny nitsanganan’ny Filan-kevitry ny Fampihavanam-pirenena Malagasy na ny CFM, izay rafitra ara-panjakana natao iantsoroka ny fampihavanana eto amintsika, araka io anarany io.
Praiminisitra Solonandrasana Miala raha vao tsy lany ny lalàm-pifidianana ?
Tsy mandry andro tsy mandry alina ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier amin’ny fitadiavana hevitra hampandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Toa nanantena fatratra fa handeha araka ny tokony ho izy ny kajikajy rehetra hahafaha-mampandany mora fotsiny ilay lalàna.
Antenimieram-pirenena Hafana indray ny adihevitra manomboka anio
Ho vory lanona indray ny antenimieram-pirenena satria hiditra amin`ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo anio zoma 23 martsa araka ny fampiantsoana nataon’ny filan-kevitry ny minisitra omaly; ka handinika ireo volavolan-dalàna fehizoro 3 momba ny fifidianana.
Fifidianana tsy tanteraka Hiteraka savorovoro marolafy
Fitondram-pankajana tena fetsy ity indray mitoraka ity. Nandritra ny fanokafana ny Seminera ifanakalozan'ny RECEF dia nilaza ny filoham-pirenena fa mbola mianatra demokrasia isika nandritra ny kabary lahateniny.
Krizy miverimberina Ho gisitra ihany ny Malagasy ny farany
Mihamizotra mankany amin’ny krizy hatrany i Madagasikara. Ny eo tsy voavaha, ny hafa misosoka ihany. Ny krizy politika aterak’ity lalam-pifidianana ahemotra lava ity manginy fotsiny.
Solombavambahoaka Efa tena leo sy kivy amin’izy ireo ny olom-pirenena
Efa tena leo sy kivy ny momba ireny solombavambahoaka ireny ny ankamaroan’ireo olom-pirenena eto amintsika.
Orlando Robimanana Tafiditra tamina raharaha kolikoly avo lenta
Voarohirohy tamin’ny raharaha kolikoly misy hidiran’i Claudine Razaimamonjy sy ny minisitry ny vola sy ny tetibola teo aloha Jean Razafindravonona ihany koa ny tale jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana teo aloha Orlando Robimanana noho ny resaka famoaham-bola mitentina 400 828 000 Ar nandoavana ny faktiora mitondra ny laharana 012/2014 sandan’ny fanavaozana fotodrafitrasan’ny INTP teny Antanetibe ny 05 janoary 2015.
Savorovoro tsy nifankahitana ny tao Mampikony ny sabotsy teo. Tohin�ny raharaha nafahatesana dokotera iray tany an-toerana ny volana oktobra no fototry ny olana ka niteraka fifandonana teo amin�ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka.
Taorian’ny fanadihadiana mantsy dia nivoaka ny loharanom-baovao fa nilefa tany Port Berger ny tovolahy 2 kambana voatondro fa tompon’antoka tamin’izany. Nandefa mpitandro ny filaminana haka azy ireo hanaovana fanadihadiana ny zandary tao Mampikony. Ren’ny olona ny vaovao ka efa nandrasan’izy ireo ny hahatongavan’ireo voarohirohy tao Mampikony hanaovany azy. Tonga tany amin’ny zandary ny loharanom-baovao amin’ny mety hampiharan’ny olona ny fitsaram-bahoaka amin’ireto olona voatondro ho namono dokotera ireto ka navily lalana avy hatrany ny fiara nitondrana azy ireo fa tsy nihazo an’i Mampikony fa nalefa tany Antsohihy. Tezitra noho izany ireo olona efa nivorivory tao Mampikony ary nankeny amin’ny tobin’ny zandary, izay mifanila amin’ny fonja sy ny tranon’ny zandary. Raikitra ny savorovoro ka norobaina sady nodorana ny tranona zandary miisa 3. Fiara 2 ihany koa no may kila forehitra. Tsy maintsy nanao tifi-danitra sy nanapoaka lakrimôzenina ny zandary. Nanapoaka basy ihany koa ny mpiambina ny fonja noho ny feo efa nivoaka fa hodoran’ireo andian’olona ny fonja sy ny biraom-panjakana. Vokany, olona 4 no voalaza fa naratra mafy nandritra ny fifandonana. Efa feno mpitandro ny filaminana an-jatony ao Mampikony amin’izao fotoana ary mihatra ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny andro alina. Raha ny zava-nisy omaly hariva anefa dia mbola nisy indray ny korontana ary tsy mbola voafehy ny filaminana ka nisy ny fandorana tranon’olon-tsotra sy fitorahana taksibrosy miisa 5 izay vaky avokoa ny fitaratra omaly ary naharatrana olona. Efa any an-toerana ny tompon’andraiki-panjakana sy mpitandro ny filaminana maro mametraka ny paikady handaminana ny raharaha. Nanome toky ihany koa ireo sojabe any an-toerana fa handamina ny olona hitandroana ny filaminan’ny tanàna taorian’ity raharaha nafana ity.